Tratry ny taona 2021 – Tsodrano
Notakarina tamin’ny Mpitoriteny3 : 1 – 8
Misy fotoana ho an’ny zavatra tsirairay ary misy fotoana ho an’ny raharaha rehetra ety amban’ny lanitra :
Ao ny andro iterahana ary ao ny andro ahafatesana ;
Ao ny andro arariana ary ao ny andro ahasalama.
Ao ny andro maha zaza ary ao ny andro maha tanora ;
Ao ny andro maha lehibe ary ao ny andro maha antitra ;
Ao ny andro amangiana ary ao ny andro andosirana ;
Ao ny andro andratra ary ao ny andro anasitrana ;
Ao ny andro iarahana ary ao ny andro isarahana ;
Ao ny andro ampirotsa-dranomaso ary ao ny andro ampiato ny alahelo ;
Ao ny andro itiavana ary ao ny andro ankahalana ;
Ao ny andro iadiana ary ao ny andro ifamelana ;
Ao ny andro iasana ary ao ny andro ialan-tsasatra ;
Ao ny andro ihinanana ary ao ny andron’ny mosary ;
Ao ny andro irotsahan’ny orana ary ao ny andro maina ;
Ao ny andro ikoranana ary ao ny andro hipetrahana ;
Ao ny andro itsanganana ary ao ny andro handohalehana ;
Ao ny andro ankahasitrahana ary ao ny andro hanenjehana;
Ao ny andro anorenana ary ao ny andro anjerana ;
Ao ny andro iaretan-tory ary ao ny andro maha sambatra ;
Ao ny andro amihinana ary ao ny andro ifadiana tsy hamihinana ;
Ao ny andro mahasorena ary ao ny andro hanadiovam-po ;
Ao ny andro ikorontanana ary ao ny andro ilaminana ;
Ao ny andro anangonana ary ao ny andro anapariana ;
Ao ny andro ibibangoana,mazan, angoana ary ao ny andro hasola ;
Ao ny andro anginana ary ao ny andro itenenana ;
Ao ny andro anadinoina ary ao ny andro ahatsiarovana ;
Ao ny andro isasarana ary ao ny andro ahombiazana ;
Ao ny andro maizina ary ao ny andro mazava ;
Ao ny andro andaozana ny tanindrazana ary ao ny andro itodihana ao aminy indray;
Ao ny andro andratohana fianarana any lavitra ary ao ny andro mahatamana any ;
Ao ny andro anaovan’ny fianakaviana veloma ary ao ny andro hitsenanana ny fiverenana ao tanindrazana ;
Ao ny andro mampitebiteby ary ao ny andro mampitony.
Niaina tao anatin’ny 365 andro izay nomen’Andriamanitra izao tontolo izao isika. Isaorana ny Tompo Andriamanitra izany. Na dia nisy aza ireo nodi-mandry dia nomeny ny fifaliana hahatratra ny taona 2021 indray noho ny famindram-pony. Mahatsiaro am-bavaka izay nadalovan’ny fahoriana ka namoy hava-tiana.Tsy ho hadino ny Fitiavany lehibe ary ho Azy irery ny voninahitra. Koa miarahaba anao indray nahatratra ity taona vaovao ity. Ny Tompo Andriamanitra no hitantana sy hivimbina hatrany.
Atolotry ny ekipan’ny « tsodrano.com »
Sary tamin’ny Protestants en fête Strasboug 2017
alahelo, andro, antitra, fahoriana, fianakaviana, hamihinana, ifamelana, isarahana, lanitra, maina, maizina, Mazava, mosary, orana, tanindrazana, tanora, vonihahitra, zaza